स्वास्थ्य पेजआईसीयू र भेन्टिलेटरमा कति छन् कोभिड संक्रमित बिरामी ? - स्वास्थ्य पेज आईसीयू र भेन्टिलेटरमा कति छन् कोभिड संक्रमित बिरामी ? - स्वास्थ्य पेज
आईसीयू र भेन्टिलेटरमा कति छन् कोभिड संक्रमित बिरामी ?
नेपालगन्जः नेपालमा ८३ जना कोभिड–१९ संक्रमितको आईसीयु र १९ जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आइतबारसम्मको तथ्यांकअनुसार देशका विभिन्न अस्पतालमा ती संक्रमितहरुको उपचार भइरहेको छ । १९ जना गम्भीर कोभिड–१९ संक्रमितहरुको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेकामा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा १७ जनाको उपचार भइरहेको छ ।
यस्तै, प्रदेश नंं। १ र लुम्बिनी प्रदेशमा १÷१ जना कोभिड–१९ संक्रमितको भेन्टिलेटरमा उपचार जारी रहेको छ । मन्त्रालयकाअनुसार ८३ जना कोभिड–१९ संक्रमितको विभिन्न देशका विभिन्न अस्पतालका आईसीयुमा उपचार जारी छ ।
जसमा बागमती प्रदेशमा ५८ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा १२ जना, प्रदेश नं। १ मा ८ जना, गण्डकी प्रदेशमा ३ जनाको आईसीयुमा उपचार भइरहेको छ ।
यसैगरी, सुदूरपश्चिम र प्रदेश नं। २ मा १÷१ जना कोभिड–१९ संक्रमित आईसीयुमा उपचार गराइरहेका छन् ।
१८ पुष २०७८, आईतवार प्रकाशित